Home » Fitsangatsanganana an-dalamby » India hamita ny tetezana ambony indrindra manerantany amin'ny 2022
India hamita ny tetezana ambony indrindra manerantany amin'ny 2022
Chenab Rail Bridge no ho tetezana ambony indrindra manerantany taorian'ny fahavitan'ity taona ity
Ny fanidiana ny arofanina dia iray amin'ireo faritra sarotra indrindra amin'ny tetezana ambonin'ny Chenab
Ny tetikasa dia antenaina ho vita amin'ny Desambra 2021 ary hanana androm-piainana 120 taona
Ny Bridge Chenab dia ao anatin'ny tetik'asa mpampifandray ny Udhampur-Srinagar-Baramulla any India
India Ministry ny lalamby dia namoaka fanambarana nanambara fa nahavita ny fanamboarana ny andohalambo vy an'ny Chenab Rail Bridge ny lalamby Indiana, izay ho tetezana ambony indrindra manerantany taorian'ny nahavitany tamin'ny faran'ity taona ity.
Araka ny fanambarana iray, "Ny fanidiana ny arofenitra dia iray amin'ireo faritra sarotra indrindra amin'ny tetezana ambonin'ny Chenab ary ny fahavitany dia dingana lehibe mankany amin'ny fahavitana ny fiakarana mirefy 111 km avy any Katra ka hatrany Banihal."
"Amin'izao fotoana izao, mila adiny 12 amin'ny alàlan'ny arabe (Katra-Banihal), fa aorian'ny fahavitan'ilay tetezana, dia halava ny halaviran'ny fiaran-dalamby," hoy ny mpitantana jeneralin'ny Railway Avaratra Ashutosh Gangal.
Ny metaly farany metaly 5.6 metatra dia natsangana tamin'ny tampony avo indrindra ary nanatevin-daharana ny sandry roa amin'ny andohalambo izay mifampitohy ankehitriny avy amin'ny moron'ny renirano Chenab.
Ny Bridge Chenab dia ao anatin'ny tetik'asa mpampifandray ny Udhampur-Srinagar-Baramulla any India (USBRL). Ny tetezana mirefy 1,315 metatra dia haorina amin'ny 359 metatra ny haavony. Vantany vao vita io dia io no ho tetezana ambony indrindra eto ambonin'ny tany, ary 35 metatra amboniny noho ny Eiffel Tower.
Nilaza ihany koa ny minisitera fa ny tetezana dia ho afaka hanoherana ny rivotra hatramin'ny 266kph, ary koa ny horohoron-tany izay manana ny tanjany hatramin'ny valo, ary fipoahana mahery vaika.
Ny asa amin'ny tetik'asa, izay misy ny fananganana tetezana sy tonelina maromaro manamorona ny zotra, dia nanomboka tamin'ny voalohan'ny taona 2000, saingy naato noho ny fanambin'ny fananganana. Nanampy ny fahatarana koa ny valanaretina coronavirus. Ny tetikasa dia antenaina ho vita amin'ny Desambra 2021 ary hanana androm-piainana 120 taona.